Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ahoana no hamonjena vohitra miaraka amin'ny fizahan-tany dite
Mitovitovy amin'ireo dingana manjelanjelatra ny lakan-dite, namirapiratra teo ambanin'ny masoandron'ny fararano mafy, satria nitsimoka tao an-tanànan'i Liubao tamin'ny faran'ny volana Oktobra ireo zavamaniry dite maitso nandravaka azy ireo.
Fotoana fohy taorian’ny filatsahan’ny Frost’s Descent, faha-18 amin’ny fe-potoana faha-24 amin’ny masoandro, ny 23 okt. Fotoana tsara ho an'ny fombafomba izany. Heverina ho faran’izay maranitra ny fofon’ny raviny noho ny fahasamihafan’ny maripana amin’ny andro sy ny alina amin’izao vanim-potoanan’ny taona izao ary kely ny ranon’orana.
Tsy ny tantsaha ihany no nikatona teo amin'ireo hazo, fa ireo mpitsidika mikaroka ny hakanton'ny tanàna ambanivohitra izay mipetraka ao amin'ny distrikan'i Cangwu, Wuzhou, faritra mizaka-tenan'i Guangxi Zhuang.
Matetika ny mpitsidika dia mitondra fahatsapana hetsika ho an'ny tanàna mangina mahazatra amin'ny volana oktobra, araka ny filazan'ny manampahefana eo an-toerana. Maro amin’izy ireo no manao izay ataon’ny mponina: mitondra harona volotsangana eny an-tsorony ary maka ravin-dite. Mazava ho azy fa maka sary izy ireo manoloana ny lakandrano mananontanona sy ny lanitra manga mazava.
Amin'ny fiafaran'ny andro, ny mpandeha dia afaka mamelombelona ny tenany amin'ny dite, mianatra manendy sy manodina ny raviny amin'ny fomba tranainy, fa ny fofony dia miparitaka avy amin'ny vilany mafana ary manenika ny rivotra.
Nitsidika an’ilay tanàna i Kosima Weber Liu, avy any Alemaina, tamin’ny Oktobra, ary nampiaiky volana an’ilay dite tao, indrindra fa ny vokany ara-pahasalamana.
“Efa nandre momba ny fanaovana dite ihany aho taloha, saingy efa niainako ny atao hoe manatsatso dite ny tenako,” hoy i Liu.
Manana fahatakarana tsara kokoa momba ny dingana sy ny fombafomba manodidina azy izy.
“Tsapako fa nandeha tany amin'ny toerana manokana sy mistika tany Shina aho.”
Ny tanànan'i Liubao dia nalaza tamin'ny dite maizimaizina izay, nandritra ny 1,500 taona, dia zava-pisotro misy alikaola. Manana fepetra mety tsara amin'ny famokarana dite izy io, miaraka amin'ny equilibrium ny hamandoana, ny tara-masoandro, ny tany ary ny haavony, eo amin'ny 600 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, izay saika tsara loatra raha tsy marina.
Ny dite Liubao dia heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra ao amin'ny firenena ary natao ho fanomezam-boninahitra ny Emperora Jiaqing nandritra ny Dinastia Qing (1644-1911).
Nampiasaina ho fanafody raokandro koa izy io mba hanoherana ny toe-piainana mafana sy mando rehefa nifindra monina tany Azia Atsimoatsinanana ny Sinoa tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-19.
Ny dite Liubao dia azo vokarina manomboka amin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano. Na dia heverina ho malefaka indrindra aza ny raviny avy amin'ny fiandohan'ny lohataona, dia mitondra tsirony miavaka izy ireo rehefa mijinja amin'ny faran'ny fararano.
Ny manam-pahefana eo an-toerana dia namolavola dite sy fizahan-tany mitambatra nandritra ny taona maro.
"Noho ny mpizaha tany maro kokoa, ny 'fambolena' izay mitambatra ny trano fonenana, ny fambolena ary ny fiompiana dite dia nitombo," hoy i Cao Zhang, sekreteran'ny Antoko ao an-tanànan'i Liubao.
Ao amin'ny tanànan'i Dazhong, atsimoatsinanan'i Liubao, Liang Shuiyue dia nanandrana ara-bakiteny ny tombotsoan'ny fizahantany ambanivohitra.
Mitantana trano fandraisam-bahiny izy izay mitondra fidiram-bola tsy tapaka ho an'ny fianakaviany.
Nahatratra 88,300 yuan ($13,810) ny fidiram-bolan'ny Dazhong tamin'ny taon-dasa, taorian'ny famporisihana ny mponina ao an-toerana mba hamolavola zaridaina dite eo ambanin'ny fandaharan'asa mampivondrona ny fandraharahana, ny fanaraha-maso ny fiaraha-miasa ary ny tokantrano any ambanivohitra.
Nahazo mpitsidika 150,000 i Dazhong nandritra ny Fetiben'ny Lohataona tamin'ity taona ity ary tafiditra ao anatin'ny fehikibo famelomana ambanivohitra izay niezahan'ny manampahefana Liubao hatsangana ilay tanàna.
Ny tanjona dia ny hamolavola “lalana dite” miavaka, trano fonenana ambanivohitra ary zaridaina dite maitso ho fizahan-tany, ary hamorona sehatra tsy manam-paharoa, miaraka amin'ny tanàna mampiseho toetra samihafa, hoy i Cao.
Ny tranombakoka dite Liubao dia manome tsiro feno ny mpitsidika ny zavatra tafiditra amin'ny fampidirana ny zava-pisotro mamelombelona ao anaty kaopy.
Khani Fariba sy Ishtiaq Ahmed, mpivady avy any Iran, dia gaga tamin'ny fifankatiavana nifandray tamin'ny dite nandritra ny fitsidihany ny tranombakoka.
Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha-20, nanome dite sy sira Liubao ho an'ny ampakarina ny mponina mba hanehoana fitiavana maharitra, satria avy any an-tendrombohitra ny dite ary avy any an-dranomasina ny sira.
Ao amin'ny tanàna akaiky an'i Tangping, mpandova ny lova ara-kolotsaina tsy azo tsapain-tanana, i Wei Jiequn, 63 taona, sy ny zanany vavy Shi Rufei, 34 taona, dia nifikitra tamin'ny teknika nentim-paharazana, anisan'izany ny fanamainana, ny fandrahoan-tsakafo ary ny fandevenana ny ravina.
Manao atrikasa ao an-tanàna izy ireo izay ahafahan'ny mpizaha tany mianatra momba ny kolontsaina dite Liubao amin'ny alàlan'ny fanandramana ny dingana famokarana nentim-paharazana.
Shi dia mpitarika tamin'ny fanampiana ny mponina eo an-toerana hampitombo ny fidiram-bolany amin'ny fanaovana dite. Niziriziry tamin'ny fanavaozana ny teknika fanaovana dite nentim-paharazana i Shi ary nizara ny traikefany tamin'ireo tokantrano ambanivohitra eo an-toerana.
Nanomboka tamin'ny 2017 ka hatramin'ny 2020, nitombo ny faritry ny fambolena dite Liubao ao amin'ny distrikan'i Cangwu avy amin'ny 71,000 mu (4,733 hektara) ho 92,500 mu, araka ny filazan'ny governemanta eo an-toerana. Ny famokarana dite isan-taona dia niakatra avy amin'ny 2,600 taonina ka hatramin'ny 4,180 taonina tao anatin'io fe-potoana telo taona io, ary nitombo avo roa heny ny sandan'ny vokatra tamin'ny 310 tapitrisa ka hatramin'ny 670 tapitrisa yuan.
Amin'ny 2025, hahatratra 50 lavitrisa yuan mahery ny vidin'ny dite Liubao avy any Wuzhou, hoy i Zhong Changzi, ben'ny tanànan'i Wuzhou.
"Amin'izany fototra izany dia hiroso hatrany izahay hamorona indostrian'ny 100 lavitrisa yuan," hoy i Zhong.